तिमी तारे भिर,पवित्र सुब्बा र बल्झिएको स्मृति - HongKong Khabar
तिमी तारे भिर,पवित्र सुब्बा र बल्झिएको स्मृति
प्रकाशित मिति: मंगलबार, मंसिर २१, २०७८ समय: २१:११:२२
शशि थापा सुब्बा
साथीहरू बीच सबै भन्दा मिलनसार थिइन ऊनी । सोझी स्वाभावकि ऊनी रिसाएको पनि अरूले थाहा पाउदैन थियो । रिसाएको बेला अनुहारको रंग मात्र हल्का परिवर्तन हुन्थ्यो । कहिलेकाहीँ कुनै कुरोमा साच्चै रिसाइन कि भनेर म डराएर ऊनी तिर हेर्थें। तर फेरी मुसुक्कै मुस्कुराएर अनुहारको रंग उज्यालो बनाउथिन ।
एक दिन हामी म,तारा, अमृता दिदि र ऊनी सिनेमा हेर्न जाँदै थियौं। त्यति बेलाका चर्चित संगीतकार केवल सुब्बा दाईले सोध्नु भो “कता हिडेका तिमीहरू? “
हामीले ढाँटन नपाई सोझी केटीले भनिहाली “फिल्म हेर्न हो दाई ।”
अझ अफर गर्दै भनिन “जाने हो तपाईहरू पनि ? आउनुहोस न !”
मेल भर्सनकि नायिका मेरुना मगर शशी थापा सुब्बाकि छोरि
दाईसंग अर्को एकजना पनि थिए तर को थिए अहिले बिर्सें। दाई पनि के कम उठिहाल्नु भो र हाम्रो पछि लाग्नु भो। हिड्यौ सबैंजना फिल्म हल तिर ।
चार जनाको टिकट काटने पैसा मात्र रहेछ उसंग। तर अरु पनि थपिएपछि उसले त सेकेन्ड क्लासको टिकट पो काटेछिन।
“पैसा छैन भने भन्नु पर्छ नि लाटीहरू के भाको ?” केवल दाइले बिच्किदै भन्नू भो।
वास्तवमा पैसा मैले पनि दिइन होला । सबै पैसा उसैको थियो क्यार । फिल्मको इन्टरभल भयो। केवल दाईले रिसाउदै भन्न्नु भो “अब उज्यलोमा टाउको लुका है केटी हो सबै कलाकार छौं। चिन्छ नि मान्छेले ।” हामी सबै गलल्ल हाँस्यौं ।
कहिलेकाहीँ कार्यक्रमहरू हुँदा वा गर्नु पर्दा मेरो र उसको घरबाट अनुमति मिल्दैन थियो । “कस्तो बुझ्दैनन यार ” भन्दै म रिसाउदै उसंग कुरा गर्थें । उसले “बिस्तारै बुझ्छन नि नरिसा न केटी” भन्थिन ठुलो मान्छे जस्तो । उसको कुरा सुनेर म छक्क पर्थें। तर अहिले जस्तो त्यो बेला उसको धैर्यता र सुझबुझको ब्याख्या गर्ने न क्षमता न त शब्द नै थिए मसंग ।
तिमि तारे भिर गाउदाको समय : पवित्र सुब्बा
यिनी अरू कोहि नभएर धरान रंगकर्मको इतिहासमा अमुल्य योगदान पुर्याउने व्यक्तित्व हाम्री प्यारी “पबी” अर्थात तपाईहरूको मन मुटुमा बस्न सफल ” तिमी तारे भिर म त लहरा” लगायतका दर्जनौं चर्चित र कालजयी गीत कि जननी र मखमली आवाजकी धनी गायिका पवित्र सुब्बा ।
हुन त कहानी लेख्ने हो भने शारदा सुब्बा , तारा राई , शोभा सुब्बा,अम्रिता थापा , देवेन्द्र थापा ,स्व केवल सुब्बा,स्व बिनोद राई, स्व सुनिल सुब्बा लगायत थुप्रै स्रष्टाहरूलाई समेटेर लेख्नु पर्ने हुन्छ । कुनै दिन जाँगर चलेमा लेखौंला ।
आजको सन्दर्भ चाहि “तिमी तारे भिर म त लहरा” रहेको छ। यो गीतले २८/२९ बर्ष पहिले मलाई बेस्सरी रूवाएको थियो । कहानी धेरै लामो छ । यस बारेमा केहि कुरा चाहिँ अस्ति हङकङबाट पत्रकार डम्बर कृष्ण श्रेष्ठले पनि लेखेको पढन पाएँ।
यो गीतको मेल भर्सनमा श्रब्यदृष्य नै बन्दैछ भनेर मेरि छोरी मिरूनाबाट सुनेको थिएँ। सबै कुरा!मिलाएर नै गरेको होला भन्ठानेर मैले भने “ए ल ल ! राम्रो गर है। यो गीत गर्नु त ठुलो रिस्क लिनु हो नि फेरी। असाध्यै रूचाइएको सुपर हिट गीत हो नानी ।”
“हो ममी ! आण्टीको गीत हो नि ।” छोरीले भनिन।
छोरीले जे गर्छ गरोस र आफै सिक्दै जावस भनेर म कहिल्यै उसको काममा इन्टरफेयर गर्दिन । राम्रो भए राम्रो हुन्छ नराम्रो भए केहि सिक्छ नानीहरूले भन्ने मेरो मान्यता छ । दुवै छोरीहरूले गल्ती गरेपछि पश्चाताप गरेको हेर्न पाएको बेला मलाई मज्जा लागेर आउछ।
त्यो गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएपछि मैले मेरो अनलाईन टिभीमा बिश्व लिम्बुले लिएको पबीको अन्तर्वार्ता हेरें । उसको उहि मायालु चित्त दुखाइसंगै मुसुक्क मुस्कुराउने बानी जस्ताको त्यस्तै देखेँ। अनि आफ्ना अनुजहरूप्रतिको उत्तरदायित्वपुर्ण प्रेमभाव आशिर्वाद सहितको शुभकामनाले साह्रै मन छुयो।
अहा ! पबि दुखेको चित्त लुकाएर हाँस्नु कसरी सिकिस हौ साथी ! सहकर्मीहरूले यो गीतको मेल भर्सन बनाउदा मुल गायिकालाई चटक्कै बिर्सिएको कुरा राख्दा के बित्थ्यो र साथी ? तिम्रो गुनासो गर्ने बानी नभए पनि केहि जवाफहरू त दिनु पर्थ्यो नि केटी । मेरो मनमा यस्तै कुरा खेली रहयो। मनमा बेचैनी र छटपटी भैरहयो।सच्याउन नसकिने त्रुटीले यसरी पिडा दिएको मलाई थाहा थिएन ।
हुन त गीतकार र संगीतकारका आफ्नै अधिकारका कुरा होलान । तर गीतकार र संगीतकार यो दोस्रो कार्यमा अटाउन सके भने मुल गायिकालाई चाहिँ अहिलेका नयाँ पुस्ताले कसरी अटाउन सकेनन होला ? अग्रज बौद्धिक द्वय गीतकार र संगीतकार त यस्तो कुरामा जानकार नै हुनु हुन्छ। भाईं बहिनीहरूलाई गायीका पनि अटाउनु पर्ला भनेर सल्लाह दिनु कन्जुस्याइ गर्नु भएको हो कि ?
उडान टिभी सोमा अन्तरबार्ता दिने तयारीमा खिचिएको पवित्र सुब्बाको वर्तमान तस्वीर
यो मेरो हल्का चित्त दुखाई र जिज्ञासा मात्र हो। नयाँ पुस्तालाई अग्रज पुस्ताले उदाहरणीय संस्कार सिकाउन अगुवाइ गर्नु पर्दछ भन्ने मात्र मेरो आग्रह र सोच हो।
अन्तमा यो गीतले छोटो समयमा नै धेरै सफलता पाएको उपलक्ष्यमा रचनाकार आदरणीय श्रष्टा श्रवण मुकारूङ ज्यू, संगीतकार शान्तिराम राई ज्यू र शब्दहरूमा आत्मा भर्ने पहिलो गायीका सखी पवित्र सुब्बा , गीतको भावलाई मर्मस्पर्शी ढंगले गाउनुहुने प्यारो भाई रेवत राई , यो श्रब्यदृष्यको मूल खम्बा निर्देशक किरण चाम्लिङ राई र यो सृजनामा आत्मा भरेर जिउँदो बनाउने युग नायक दयाहाङ राई लगायत दृष्यमा अटाएका र पर्दा पछि रहेका सम्पूर्ण कलाकारहरूलाई यो कालजयी सिर्जनालाई पुनः व्युँताइदिनु भएकोमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना ।
पवित्र सुब्बाको स्वरमा रहेको तिमि तारे भिर भिडियो लिङ्क